बदला लिन सर्पको टाउकै चपाएपछि....
बदला लिन सर्पको टाउकै चपाएपछि….
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित हारडोईमा एउटा अनौठो घटना घटेको छ । एउटा व्यक्तिले सर्पको टाउको टोकेर चुँडालिदिएका छन् । त्यसपछि उनले टाउको चपाएर फलिदिए ।
शुक्लापुर भागर गाउँबाट एम्बुलेन्स सेवालाई एक किसान बेहोस बनेको खबर प्राप्त भएको थियो । सोनेलालाई साँझ सात बजे अस्पताल पुर्याइएको थियो जहाँ उनलाई डा. महेन्द्र वर्मा तथा फार्मासिस्ट हितेस कुमारले जाँच गरेका थिए । ‘सोनेलालका छिमेकी राम सेवक र राम स्वरुपले उनलाई सर्पले टोकेको बताएपछि हामीले उनको शरीरमा टोकेको दाग खोज्यौँ तर फेला पार्न सकेनौँ,’ हितेशले भने ।
डाक्टरका अनुसार सर्पले उनलाई टोकेकै थिएन । बरु, सर्पको टाउको चपाउँदा विषका कारण बेहोस भएको हुनसक्ने डाक्टरको अनुमान छ ।
स्थानीयका अनुसार सोनेलाल लागुऔषध दूर्व्यसनी थिए ।